नेपाल आज | कसरी बन्छ सिक्स प्याक? जान्नुहोस् टिप्स
कसरी बन्छ सिक्स प्याक? जान्नुहोस् टिप्स
शनिबार, ०४ जेठ २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज(PO)
काठमाडौं । अहिलेको युवापुस्तामा शारीरिक सुगठनप्रतिको मोह एकदमै धेरै रहेको पाइन्छ । त्यसमा पनि सिक्स प्याक एब्स बनाउने ध्याउन्नमा अधिकांश युवा फिटनेस सेन्टर धाइरहेका हुन्छन् । तर, सिक्स प्याक एब्स बनाउन त्यति सजिलो भने छैन । सामान्यतया, ६ देखि आठ महिना लाग्ने गर्छ । यसका लागि खानपानमा उच्च सतर्कता र कडा व्यायाम गर्न अत्यावश्यक छ । त्यस्तै, शारीरिक बनोट, तागत र मिहिनेतमा समेत भर पर्छ । अब जानौँ, सिक्स प्याक एब्स बनाउन आवश्यक टिप्स । यो जानकारी नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
कार्डियोलाई एरोबिक व्यायाम पनि भनिन्छ, विशेषगरी यो शरीरमा भएको बोसो घटाउनका लागि गरिन्छ । त्यस्तै, सिक्स प्याक एब्स बनाउनसमेत कार्डियो भास्कुलर महत्वपूर्ण हुन्छ । नियमित कार्डियो एक्सरसाइज गर्दा छोटो समयमा पेटको बोसो घटेर जान्छ । यसका लागि प्रत्येक दिन २० देखि ४० मिनेट वा हप्तामा एक सय ५० देखि तीन सय मिनेटसम्म व्यायाम गर्नुपर्छ । कार्डियो व्यायाम सहज बनाउन दौड, बाइकिङ, साइक्लिङ र पौडीजस्ता आफूलाई मन पर्ने खेल खेल्न सकिन्छ ।
मांसपेशीको व्यायाम गर्दा शरीरका मांसपेशी बढ्नुका साथै बलिया हुन्छन् । जसले गर्दा शरीर सुगठित भएर जान्छ । तर, यसका लागि नियमित सन्तुलित भोजन गर्न आवश्यक छ । यसमा क्रन्च, लङ आर्म क्रन्च र रिजर्ब क्रन्च आदि अभ्यास गर्न सकिन्छ ।
उच्च प्रोटिनयुक्त खानाको सेवनले पेटसँगै शरीरको मोटोपना घटाउन सजिलो हुन्छ । प्रोटिनको सेवनले अन्य क्यालोरीयुक्त पदार्थको आवश्यकता कम हुन्छ । भोक कम लाग्ने भएकाले दैनिक खानासमेत कम खाइन्छ । त्यस्तै, प्रोटिनले अभ्यासको समयमा मांसपेशी बलियो बनाउने भएकाले डड्डीमा समस्या आउँदैन ।
उच्च तीव्रता अन्तराल प्रशिक्षण
उच्च तीव्रता अन्तराल प्रशिक्षण अर्थात् हाई–इन्टेन्सिटी इन्टर्भल ट्रेनिङ एक एकप्रकारको विशेष व्यायाम हो । जसको प्रयोगले थोरै समयमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । तर, यसमा बढी मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । एक अध्ययनअनुसार एउटा युवाले २० मिनेटका दरले हप्तामा तीनपटक उच्च तीव्रता अन्तराल प्रशिक्षण गरेमा ४ दशमलव ४ पाउन्ड तौल घटाउन सक्छ ।
शरीरमा भएका विकारयुक्त वस्तु बाहिर ल्याउन र शरीरको तापक्रम नियन्त्रण गर्न पानीले प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ । साथै, पाचन प्रक्रिया र रक्तसञ्चारका लागि पनि शरीरमा पानीको मात्रा उचित हुनु जरुरी छ । सामान्यतया अभ्यासदौरान पानी पसिनाको माध्यमले शरीरबाट बाहिर निस्कन्छ । त्यसैले, अभ्यास गर्दा पानीको मात्रा कम भएको हुन्छ । यस्तो वेला पानी नपिएमा स्वास्थ्यमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । तसर्थ, व्यायामदौरान प्रशस्त पानी पिउन जरुरी हुन्छ ।
प्रशोधित खानेकुरा बन्देज
सिक्स प्याक एब्स बनाउन चाहनेले ड्राई फुड अर्थात् प्रशोधन गरिएका खानेकुरा खानुहुँदैन । यस्ता खानेकुरामा पौष्टिक तत्व कम हुने भएकाले शरीरलाई चाहिने आवश्यक तत्वमा कमी आउँछ । बरु, प्रोटिन, खनिज र भिटामिनयुक्त खानेकुराको सेवनमा जोड दिनुपर्छ । सामान्य अवस्थाभन्दा व्यायाम गरिरहेको समयमा उच्च पौषणयुक्त खानेकुराको आवश्यकता हुन्छ । यसले शरीर सुगठित हुनुका साथै स्वास्थ्यसमेत राम्रो बनाउँछ । अजय महर्जन, फिटनेस इन्स्ट्रक्टर बानुज टोटल फिटनेस, कमलपोखरी
शारीरिक सुगठन सिक्स प्याक